कसरी सोशल मीडिया टोलीहरू संरचित छन् Martech Zone
GO-Gul.com बाट यो इन्फोग्राफिकले कसरी सामाजिक मिडिया टोलीहरू काम गरिरहेको छ भनेर विस्तृत विविधता चित्रण गर्न ठूलो काम गर्छ।
जान्नुहोस् कति व्यवसायहरूले उनीहरूको सामाजिक मिडिया अभियानहरूमा लगाइरहेका छन्। कति व्यक्तिले उनीहरूको सामाजिक मिडिया अभियानको लागि रोजगारी गरेका छन्, रोजगारदाताहरूले के गुणहरू खोज्छन् सामाजिक मिडिया विज्ञहरू मा हाम्रो विस्तृत इन्फोग्राफिक कसरी संगठन उनीहरूको सामाजिक मिडिया टोलीहरूको संरचनामा। गो-गल्फ इन्फोग्राफिकबाट, कसरी संगठनहरू सामाजिक मिडिया टीमहरूको संरचना गर्दछ.
यस इन्फोग्राफिकमा अलि गहिरो खन्नुहोस् र तपाइँले एक जोडी स्पष्ट तथ्या see्कहरू देख्नुहुनेछ… तथ्यहरू जस्तै कि कम्पनीहरूको १%% उपलब्ध उपकरणसँग खुसी छैनन्। वा त्यो कि% 13% कम्पनीहरूले सोशल मिडियाको उपयोग लिडहरू उत्पादन गर्न प्रयोग गरिरहेका छन्, तर केवल १%% ले वास्तविक रूपान्तरणहरू नापिरहेका छन्! हामीसँग अझै यो उद्योगमा जानका लागि एक तरीका छ!
टैग: सामाजिक संजालसामाजिक मिडिया टीमहरूटोली संरचना
अनुप्रयोग प्रेस: ​​डिजाइनरहरूको लागि मोबाइल अनुप्रयोग डिजाइनर